Guur iyo wada-noolashada
Carruurta iyo waalidiinta
Haddii labada waalid kala tagaan
Faldambiyeedka qoyska dhexdiisa
Tacaddiga carruurta loo geysto
Bulshadu waxay fidin kartaa kaalmo
Ku gabowga Iswiidhan
Taageerada iyo caawimada waayeelka ee gobolka Stockholm
Hawl gabka, marka shaqada la joojiyo
Abaabulka waxqabadka waayeelka
Qeybtan waxbarashada waxaad ka wada hadli doontaa qoyska, guurka iyo xidhidhka. Sidee ayaa loo ilaaliyaa xuquuda aadamaha sharci ahaan iyo wax qabad ahaan? Carruurta waa inay koraan oo ay yeeshaan carruurnimo wanaagsan iyadoo laga sugaayo waalidka inay ka qeyb qaataan dusgisga iyo horumarka carruurta. Waxaad heli doontaa aqoon ku sabsan waxa uu sharcigu ka qabo guurka, waalidnimada iyo dugsiga Swiidhishka. Waxay xaqiiiq ahaan u taagan tahay sinaantu? Waa maxay takooridu?
• Muxuu sharcigu ka qabaa xidhiidhka qoyska?
• Maxaan sameynayaa haddii la igu xadgubo, la ii hanjabo ama la i cunsuriyadeeyo?
• Waa maxay xuquuqda dumarka iyo carruurtu?
• Maxaa aniga waalid ahaan la iga sugayaa?
• Sidee ayuu u shaqeeyaa dugsiga Swiidhan?